DUMARKA LA YIRAAHDO EE DALKA: SHARAXAAD, SAWIR, WAXA AY KU QUUDIYAAN, WAXTARKA, KHATARTA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Xayawaanka beerta: faa'iido ama waxyeelo?
Magaca Laatiin ee dhawaaqa laadiyaha ah sida "coccineus" - macnaheedu waa "alai". Midabkan dhalaalaya oo dhalaalaya wuxuu u ahaa magaca asaaska.
Dalal kala duwan ayaa loo yaqaan 'bug', laakiin mid kasta oo ka mid ah magacyada ayaa ka markhaati fura jacaylka iyo ixtiraamka cayayaanka.
Latin America waxay ku magacaabaan "lo'da St. Anthony," Jarmalka iyo Swiss waxay ugu yeeraan "xarriijinta Maryantii Virgin," Czechs iyo Slovaks waxay ugu yeeraan "qoraxda", iyo Ruushka, Ukrayna iyo Belarusiyaanka, "ladybird." Aynu ogaanno waxa cayayaanka u keenaya beertaada - faa'iido ama waxyeelo, meesha ay ku nooshahay iyo waxa ay quudinayso.
Tafaasiisha iyo noocyada
Baalad qurux badan oo leh baaluq on baalasheeda - dhammaan dadka deggan dalka si fiican u ogyahay cayayaanka this iyo iyaga u arkeen darsin jeer ah ee jardiinooyin ubax iyo beeraha.
Dharka dhererka yar ee duqsigu wuxuu noqon karaa 5 illaa 8 mm. Dalkaan, laydhka ugu caansan oo leh toddobo dhibcood oo qolof ah ("Seven-point"). Xabbad xarrago leh ayaa loo naaneesay toddobo madow oo ku yaal baaldi casaan. Wakhti ahaan waxaa jira cayayaanka, oo si aan caadi ahayn loo rinjiray: oo leh baalal huruud ah iyo dhibco mugdi ah ama madow leh dhibco cad on qolof, iyo xataa gebi ahaanba la'aan dhibcood.
Dhibcuhu waxay noqon karaan kuwo ka badan ama ka yar toddoba, midabka caydha ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku jiro noocyo badan. Dunida, waxaa jira qiyaastii shan kun nooc oo ladybirds ah.
Xayawaanku wuxuu wax ka qabtaa dabeecada cayayaanka iyo jilbaha iyo caarada caarada, si ay u badbaadiso beeraha iyo duurka. Cayayaanka cayayaanka ee adduunka ayaa ah kuwa wax dila, kuwa ku nool gadaasha caleen ee dhirta iyo dhirta qudaarta.
Ma taqaanaa? Wadamo badan, waxaa jira jihada noocan oo kale ah ee ganacsiga beeraha sida ladybirds taranta. Beeralayda ayaa si aad ah ugu mashquulsan cayayaanka faa'iidada leh, wareegga guud ee horumarinta cayayaanka ayaa si adag u xakameynaya. Mustaqbalka, cayayaanka ayaa loo iibiyaa beeraleyda, biilkuna wuxuu kumanaan qof oo waliba ka tirsan yahay. Afduubayaasha waxaa lagu iibiyaa labadaba waddanka ay ku soo koreen oo loo diro aduunka oo dhan.
Xubnaha qaangaarka ah ee reerka ayaa ku nool kuna hibernate berrinka bannaan, oo ku dhuumanaya caleemaha qallalan ee qallalan ama hoosta cawska qallalan. Iyadoo bilawga kuleylka, waa waqtigii la jaanqaadi lahaa faracyada iyo kuwa lamid ah ku dheji karayaan 10-20 ukumood. Dukumiintigu waxay ku xiran tahay midabka caleenta qoyan ee geedo midho leh, ama gudaha gudaha caleen caleen, oo aan ka fogayn dejinta xayawaanka. Laga soo bilaabo ukumaha ilaa qaangaadhka, cayayaanka ayaa si tartiib ah u socda ilaa afar marxaladood.
Dirxiga cayayaankaasi waxay leeyihiin midab bunni ah, maaddaama wakhtiga uu ilmuhu soo dhowaado, midabka daboolka isbeddelaya jaalaha cagaarka ah. Marka jiritaanka da 'yaryar ee ka soo baxa' pupa ', waxay qaadataa wakhti yar oo qalalaasuhu ugu dambeyntii noqdo casaan.
Soo ogow wixii aad sameyn laheyd haddii aphid uu ka muuqdo tufaax, boodh, kaabaj, qajaar, currants, dill.
Dareeraha, sida dadka qaangaarka ah, badanaa waxay ku quudiyaan aphids, noocyada noocaas ahi waxay iska leeyihiin cayayaanka. Inta lagu jiro wareegga nolosha oo idil, gabar haween ah ayaa qiyaastii qiyaastii kun oo ukumood ah, taas oo ugu dambeyntii googoyn doonta, koraan oo ay dhalaan ilmo cusub oo ah kumanaan dhallinyaro ah.
Laga soo bilaabo soo saarista ukunta ilaa sii deynta lamaanaha qaangaarka ee xagaaga waxay qaadataa 40-60 maalmood. Qiimaha bayoolojiga ee laydhka ayaa ah mid aad u qallafsan: hal ciyaal dumar ah oo kaliya ayaa ku burburisa ilaa afar kun oo aphids nolosheeda oo dhan, taas oo ay ku badbaadinayso dhirta ku dhex jirta nus hektar dhul ah oo ka soo jeeda burburka.
Boomaato qosol leh oo leh baalal cas oo yar yar oo la yaqaan oo dhan oo ka yimi carruurnimada waxay burburin kartaa waxoogaa ka badan 150-170 shakhsiyadood oo ka mid ah aphids caleen-caanbadeed hal maalin.
Waa muhiim! Xajka ah ee duqsigaani wuxuu leeyahay muuqaal aan aad u soo jiidasho leh - waa muuqaal qariib ah oo aan baalasha lahayn iyo dhibco dhalaalaya dhabarka. Haddii aad aragto noocan oo kale ah nooca caanaha aad jeceshahay ama basbaaska - ha ku degdegin inaad baabi'iso, ugu dhakhsaha badan ee noocan oo kale ah waxay u rogi doontaa cilad midab leh.
Faa'iidooyinka laydhka keena waa muuqaalka indhaha la qaawan yahay, mid ayaa si toos ah u eegaya, tusaale ahaan sariiraha qajaarka. Dhinaca dambe ee caleenta waxaa lagu jilciyay aphids si firfircoon u nuugo caleemaha.
Haddii keligaa keligaa tagay, afar maalmood caleemaha qajaarku waxay gebi ahaanba qallajin doonaan dhirtu way dhiman doontaa. Hase yeeshee, gardarrada cabsida waxay bilaabaan shaqadooda, iyo geedo qajaar ah ayaa lagu nadiifin doonaa cayayaanka 24 saac gudahood. Waa joogitaanka cayayaankaas cayayaanka ah ee dhirta oo xalliya dhibaatooyinka burburinta gumeysiga xayawaanka ee duurka berry, geedo midho leh, yaanyo iyo basbaas. Awoodda aad u leedahay inaad sameysid daaweyn kiimiko ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad cuno dalagga dillaacsan ee miraha iyo khudaarta adoon cabsi lahayn.
Beerta qaar ka mid ah guga hore, arko on dhirta qaar ka mid ah gumeysiyada yar yar ee aphids, isla markiiba bilaabaan in ay la tacaalaan burburinta cayayaanka ay. Uma baahnid in gebi ahaanba burburin nacaska dhirta dhirta, sababtoo ah ladybugs weyn oo aan cunto ku dhicin.
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, ma jirto baahi loo qabo in la nadiifiyo beerta iyo beerta laga bilaabo burburka qashinka dhirta, sababtoo ah maqnaanshaha caleemaha qallalan, xayawaanka duuban ama tuubbooyinka burushka ka baxaya xilliga qaboobaha, ladybirds ma lahan meel ay ku sugaan xilliga qaboobaha si ammaan ah.
Ma taqaanaa? Waxaa jira calaamad nooca caynkan ah oo ay ku jiraan nasiib wanaag: haddii dhulalka ladybird ee calaacalahaaga, waxaad filan kartaa farxad aan la filayn, nasiib wacan. Cayayaanka duulaya lama gooyo gacanta si kasta ha noqotee si aan u ruxin nasiib, laakiin sug ilaa inta ay ka baxdo iskiis u gaar ah.
Inkasta oo faa'iidooyinka waxqabadka ee lamid ah ay aad uga badan yihiin dhibaatada ay sababaan, weli waa halkaa. Ma aha wax kasta oo ladybirds cuno waa faa'iido u ah adduunka dhirta.
Tan iyo cayayaanka waa cayayaanka iyo cayayaanka, ka sokow aphid, waxay cuni kartaa cayayaanka kale ee faa'iido leh beerta iyo beeraha khudradda.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ladybirds ah, oo waxyeelo weyn u geysata dhirta dhaqanka:
"Gourd" - wuxuu ku nool yahay waddamo kulul (Afrika, Aasiya, Turkmenistan, Azerbaijan). Waxa kale oo ay leedahay qaybo badan oo ka mid ah wadamada yurub.
Waxay u keentaa waxyeelo weyn ee soo go'ay dalagga qaraha. Gawaarida lafaha ee cimiladu maaha mid ku haboon sababtoo ah mugdiyada adag. "28-dhibcood" - waa "argagaxa Ilaah" dhabta ah ee lagu beeray baradho, yaanyo, qajaarka iyo watermelons ee gobolka Amur, Khabarovsk Territory iyo Sakhalin Peninsula.
Meelaha qaarkood, sida cayayaanka sida waxaa loo yaqaan lo'da lo'da. Cayayaanka Tani ma aha oo kaliya waxyeello dalagyada khudaarta cagaaran, khudradda iyo berry, laakiin sidoo kale waxay ku faafaan cudurada fayraska viral marka ay ka soo duulaan beerta ilaa beerta. "Harlequin", ama noocyo badan oo Asia ah - xayawaan iyo xayawaan badan, nooc ka mid ah kuwa lamid ah ee beeralayda argagaxa leh ee Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub iyo Ingiriiska. Sanadkii 1988, cayayaankaasi waxaa loo keenay North America.
Iyada oo ay caawinayaan, waxaa la soo jeediyey in ay abuuraan biocontrol oo ku saabsan faafka unugta ee aphids. Laakiin noocyadani waxay burburiyaan ma aha oo kaliya aphids, laakiin sidoo kale wakiillada noocyada u gaarka ah iyo maanta waxay noqotay noocyada ugu badan ee Maraykanka iyo Great Britain. Cilmi-baadhayaasha bayoolajiga ah ee waddankan ayaa ku dhawaaqaya qaylo-dhaan - 46ka nooc ee lo'da, kuwaas oo horeba u baahnaa, ayaa ku dhowaaday.
Waa muhiim! Beeraley ah oo raba in la ilaaliyo dadyahan ka mid ah cayayaanka bukaanka ah ee dhulkeeda waa in la xusuusnaado in daaweyn kasta oo beerta leh cayayaanka ay keeni karto dhimasho aan ahayn cayayaanka halista ah. Ka dib markii lagu daaweeyo sunta cayayaanka, cayayaanka si dhakhso ah ayay u soo celiyaan tiradooda, laakiin kuwa lamid ah ee waxtarka leh ayaa si tartiib ah u dhalin kara.
Sida loo soo jiito laydhadhka
Jiifinta jajabyada beertaada ama beertaada ma aha mid aad u fudud, laakiin suurtagal maaha. Tani waxay u baahan tahay inaad ku beerato dhirta soo jiidata cayayaanka si ay u degaan dhulkaaga.
Bannaanka beeraha ayaa muddo dheer ogaaday in cayayaankaasi ay ku dhufanayaan urta beeraha daisies, dill, tansy, yarrow.
Bannaanka u khibrad badan ayaa ka tagaya meelo raaxo leh jiilaalka si lamid ah loola dhaqmo - haddii hoyga sida diyaar u ah loo diyaariyo si ula kac ah iyo meelo habboon oo cayayaanka, ka dibna cayayaan raalli ahaanshaha iyaga u joogaan xilliga qaboobaha. Farsamada la yaqaan ee mudada dheer ka dib goosashada hadhuudhkii, rucubo nadiifinta qallalan ee madaxa hadhuudhka ayaa la xirxiray "bouquets" sida lagu xiray beerta ama sariiraha, halkaas oo ay ku koraan waxa ladybirds cunaan.
Bishii Sebtembar, raadinta meel hoy ah, qalalan oo hoy ah oo loogu talagalay jiilaalka, cayayaanka ayaa si ikhtiyaar ah u buuxiya tiro badan oo ah hadhuudh "mahads" oo si naxariis leh u bixiyay iyaga.
Gardarro waxaa la soo ururin karaa dhammaadka Sebtembar, waxaana lagu daboolay cayayaanka fadhiya "hut", u wareeji qashinka oo uga soo laalaab jibbaar. Guga, kuwa lamid ah ayaa ka baxaya hoyga jiilaalka iyaga oo ku kala firdhisan ganacsigooda.
Beetleebka hoose iyo dahab-dahab - sidoo kale ka mid cayayaanka faa'iido leh beerta.
Cayayaankaasi waxay joogi doonaan xagaaga xaga beertaada iyo beertaada. Waa in la xusuustaa in xataa xitaa daraasiin ka mid ah ladybirds ay dhaawici doonaan weyn ee ciidanka of aphids.
Xitaa haddii milkiilaha goobta uusan ka war haynin ururrada ugaarsiga ah ee loogu talagalay aphids ee jiilaalka - waxay heli doonaan hoy ah ee deyrka: ee qoryaha qoraxda, ka yar jilif ee jirridda jir ah, ka yar tahay raso ah caleemo ama shilings. Dhammaan wakiillada dunida cayayaanka ayaa halkaa ku dhuuntaan oo ay ku dhaafaan shirkad saaxiibtinimo leh. Cimiladayada, waxaa muhiim ah in hoy-goysyadu ay ka hooseeyaan dusha sare ee ciidda waxayna ku dabooshaan barafka xilliga jiilaalka, iyagoo ka ilaalinaya kuwa xaraashka ah.
Wadamada yurub, beerta gaarka ah ee "ladybirds" waxaa lagu iibiyaa dukaamada beeralayda. Guryahan noocan oo kale ah waxay u egyihiin sida boosteejooyinka ama qolalka yar-yar.
Guryaha loogu talagalay kuwa lamid ah ayaa laga sameeyaa maaddooyinka dabiiciga ah (qoryaha, bamboo, qashinka dhirta, canabka).
Xilliga xagaaga, cayayaanku uma duuli gurigaan, maadaama aysan u baahnayn hoy muddada diirimaadka, si ay ugu dhejiyaan guriga oo ay ku casuumaan inay joogaan xilliga qaboobaha, dadku waxay ku dhejiyaan bacda ay ku jirto sanduuqyadaas.
Guri noocan oo kale ah waa mid lagu qurxiyo oo qurxin kara beerta, laakiin waqti isku mid ah waxaa loogu talagalay in cayayaanka aan la qaadan karin barafka jiilaalka oo waxay awoodi doonaan inay ku noolaadaan qabowga iyada oo aan lumin. "Cow, lo'da, u duulaya cirka - halkaas oo carruurtu ay cunaan macmacaan", - kuwaas oo ka yimid caruurtooda, oo faraha kor u taagay, ma aysan sugin neefta neefta leh, marka erayadan ka dib ayaa laydhku faafin doono baalashiisa iyo boogaha ...
Tani waa gabal caruurnimadeeda qof weyn. Ladybug waa bugta xagaaga yar yar oo leh midab cad oo dabiiciga ah ee baalasha, farxadda carruurta ee saafiga ah iyo kaaliyaha xannaaneynaya beerta ee dagaalka ka dhanka ah cayayaanka beerta.
Bannaanka beeraha waa in ay abuuraan xaalado nololeed oo raaxo leh oo ay joogaan beeraheena muddo dheer - qurxinta iyo badbaadinta.